Home NDỊ AKWỤKWỌ Santiago Solari Nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye amara aha ya bụ "Indiecito". Ụmụ Santiago Solari Akụkọ anyị na-eme ka akụkọ zuru ezu maka ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara ọrụ ya na Real Madrid. Otú ọ dị, nanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Santiago Solari bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite aha ya bụ Santiago Hernán Solari Poggio. Santiago Solari mụrụ na 7th nke Ọktoba na 1976 nna ya, Eduardo Solari na mama, Alicia Susana Poggio na Rosario, Argentina A mụrụ na Rosario, Argentina. Obodo omumu ya bu ebe omumu nke Lionel Messi.
Santiago etoliteghi na nne na nna ya. Ya na ụmụnne ya anọ toro; Esteban, David, Martins na Liz Solari. A mụrụ Solari n'ime ezinụlọ egwuregwu. Ọ bụ otu ezinụlọ nke football football na mkpụrụedemede football gụnyere karịa karịa 80% nke ezinụlọ ya, nke gụnyere ezinụlọ ya.
Ná mmalite mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ dị mfe obere Santiago iji dozie ndụ ya na bọl. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya dị ka ezinụlọ nna si ebi ndụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, Santiago adịtụghị njọ na onye na-aga ọrụ n'oge ọ dị obere. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ọsọ site na football football ga-amalite ọrụ ha mgbe 6, Solari na-eto eto mgbe ọ bụla football dị ka nwa ewu. Ọ na-egwu bọl maka ọchị ruo mgbe ihe mere otu ụbọchị.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Olee otú njem njem si amalite
Ọ bụ oge okpomọkụ nke 1994, na World Cup a na-echefu echefu ga-agbapụ na United States. The Saudi Arabia mba otu biri n'ime kampos nke a obere New Jersey kọleji (Ụlọ akwụkwọ Richard Stockton dị ugbu a na Mahadum Stockton) nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Philadelphia. Ngwuregwu ahụ dị oké mkpa na Santiago n'ihi na ezinụlọ Solari na-elekọta ndị otu mba Saudi Arabia.
Ị maara?… Nwanne okenye okenye nke Santiago Jorge "El Indio"Solari bụ onyeisi nchịkwa nke ndị ọrụ Saudi mgbe nna ya Eduardo nyere aka. N'okpuru ebe a bụ foto nke ụmụnne abụọ na ndị agadi ha.
N'ime ogige ọzụzụ izu ise, Santiago nwere echiche miri emi banyere ịmalite ọrụ na bọl. Nke a bịara mgbe papa ya Eduardo na Lenahan, onye na-ahụ maka bọl na Richard Stockton (ebe ndị agha SAUDI mara ụlọikwuu) zụlitere ezigbo enyi.
N'oge ahụ, Lenahan sere onyinyo foto dị n'elu na-atụ aro n'aka Eduardo ma ọ bụrụ na nwa 17 dị afọ Santiago nwere ike ịga otu ọkara afọ na-aga mahadum na Richard Stockton ma n'otu oge ahụ na-egwu bọl maka ìgwè kọleji. Ma Santiago na papa ya Eduardo kwetara na ọ ga-enye ya ihe dị ya mkpa ntọala ngwa ngwa tupu ya agawa ụwa nke bọl ọkachamara.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - The Saudi Success
Ezinụlọ Solari nwetara ezi ụgwọ nke Tim Lenahan na mkpebi ya inye Santiago ntọala na-agba ọsọ. A manyere Lenahan ka o wepuo onwe ya mgbe e nyechara ya nkwekọrịta iji jikwa ọzụzụ Saudi Arabia n'oge nkwadebe ụwa.
Lenahan na ụmụnna Solari nyeere aka na Saudi Arabia iji nweta ụwa kachasị aga nke ọma na-agba ọsọ na United States.
Maka Saudi Arabia, "Family Solari"Ga - anọgide na - adịgide n'obi ruo mgbe ebighi ebi n'ihi mmetụta na - adịgide adịgide nke United States 1994 World Cup na - agba ọsọ.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Post-1994 World Cup
Mgbe United States 1994 World Cup, Santiago Solari malitere ọrụ ya na Richard Stockton College. Nwa obere nwa nke 17 ka ọ malitere igwu bọl na mahadum 3 ekele Tim Lenahan onye ghọrọ onye nkuzi ọhụrụ ya.
Ndị ahụ nwere ọhụụ nke ịhụ Santiago Solari na-egwu n'oge ahụ ga-echeta onye nwere nkà na onye nwere ọgụgụ isi bụ onye e ji nkà na ụzụ nweta. A hụrụ Santiago dịka onye nwere ike ịgụ egwuregwu dị iche iche karịa ndị iro ya.
N'enwe obi nkoropụ, onye iro ya nke o merekpa ahụ n'ọhịa ga-emejọ ya kama ịnwa ịnakwere ike ya.
"Ọ bụghị ahụmahụ bọl,"
Santiago Solari gwara Bọl America na 2001 nke oge ya na Richard Stockton (akụkọ Goal.com).
"Ma ọ bụ ahụmahụ banyere ndụ, banyere izute mmadụ, banyere ịmara ọdịbendị dị iche na ụzọ dị iche iche nke iche echiche. Ọ meghere isi m na ọchịchọ ịghọ ndị na-agba ọsọ ọkachamara "
N'ịbụ onye na-akwado football, Santiago jiri ohere ịmụ akwụkwọ na kọleji ebe ọ mụtara Bekee n'ụzọ ka mma.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Ụzọ Ebube
Ebe ọ bụ na ọ dị mma, ọ na-eji ọnwa anọ ya na ndị ya na Stockton tupu ya enwee ọrụ ọhụụ na Newell Old Boys bịara kpọọ. Echefula, nke a bụ ụlọ ọgbakọ ahụ Lionel Messi. N'otu afọ ahụ na 1995, Solari kpebiri iji Renato Cesarini mee ihe ntorobịa ya.
N'adịghị ka ndị ọzọ na-egwu egwuregwu football na ndị nlekọta bụ ndị gụrụ akwụkwọ nke agụmakwụkwọ ha, ọ bụ naanị Solari na-agba 2 afọ football tupu ya abanye usoro pro.
Na oge a, ka na-ahụ 1995-1996 oge, Solari maara nanị ụzọ ọ ga-esi mee ya na Europe ka ọ ga-abụ otu nnukwu ụlọ ma merie ala nna ukwu. O kpebiri ịmalite ọrụ ya na River Plate. N'elu ụlọ ndị Argentine, Solari mere aha ya site na-eduga klọb iji merie iko Libertadores na 1996. Nke a mere njem ya na Europe.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Bilie na-ewu ewu
Na 1999, Santiago gafere Atlantic iji banye Atletico Madrid na Spen. Nke a bụ oge ụlọ ọrụ ahụ na-agbasi mbọ ike, ọ nọkwa na-achọ ịtọhapụ ya. N'ịbụ onye na-egwuri egwu, Real Madrid nwere mmasị n'ebe ọ nọ mgbe otu afọ gasịrị na Atletico.
Real Madrid egbusighi ime ka Santiago Solari weputara ya ma banye ya na 2000, n'otu afọ Atletico weghaara onwe ya. Santiago Solari gwuru maka oge ise na Real (2000-2005) gụnyere nke anọ n'akụkụ egwu Zidane, bụ onye bịarutere 2001. Ọ bụ onye dị mkpa nke oge Galactico.
Ị maara?… Solari bidoro ime njem Zidane na-echeta volley ya dị egwu megide Leverkusen na 2002 Champions League ikpeazụ. N'ịbụ onye na-emepụta ohere, Solari kwukwara ihe mgbaru ọsọ dị ike nye Real Madrid. Lelee ụfọdụ n'ime ihe mgbaru ọsọ ya n'okpuru;
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Ndụ nke Onye
N'oge ọ na-egwu egwu, egwú egwú Solari abụghị nanị merie trophies football na Spain. Mma ya mara mma na-enyekwa ya ihe egwuregwu.
N'afọ 2002, ụda televishọn telivishọn nke France, Kanal + ama okot Santiago nte "Onye kachasị egwu nke afọ"Na-ekele ekele ya mara mma.
Na nzaghachi nye onyinye ahụ, Santiago Solari kwuru;
"Ana m ekele ndi weputara m, ma ejiri m na o siri ike," Solari depped. "Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na enye m ọrụ ọzọ na ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ mgbe m na-apụ. football "
Nakwa banyere ndụ Solari, Argentine na-akọwa ya ozugbo CNN dị ka a "Ndị gụrụ oké akwụkwọ, ndị na-ekwu okwu, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị hụrụ akwụkwọ n'anya." Mgbe Solari kwụsịrị ịkụ bọl, o dere otu kọlụm nke na-eduzi akwụkwọ akụkọ Spanish El Pais.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Ndụ mmekọrịta
N'adịghị ka ndị òtù ezinụlọ ya, Solari dị oke nzuzo ma na-enye nkọwa banyere nwunye ya na ụmụaka naanị ya onwe ya. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ihe ọhụụ a na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze. Ma asịrị ndị nwunye Santiago Solari na ụmụaka nwere mgbe ha ga-apụ. Dị ka akụkọ si kwuo, Santiago lụrụ di na ụmụ atọ.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Ndụ Ezinụlọ Na-agba Egwuregwu
Ihe banyere Nna ya na nna ya: Ịgba bọlbụ dịka ahia na ụmụnne abụọ, Jorge Raul na Eduardo Miguel bụ ndị guzobere ntọala ntọala nke Family Solari. Ụmụnna ndị a na-ese onyinyo dị n'okpuru malitere igwu egwuregwu ọhụrụ na Newell's Old Boys na Rosario Central n'otu n'otu.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe ha na-egwuri ọnụ n'ihi afọ itoolu nke afọ na-ekewapụ ha. N'etiti ụmụnne abụọ ahụ, Jorge maara ihe karịa. Ị maara?… Jorge Solari na-egwu megide England na 1966 World Cup quarterfinals. N'okpuru ebe a ka ọ na-ewere freekick megide England n'oge 1966 World Cup.
Mgbe ọ na-egwuri egwu na Mexico, a kpọrọ Jorge Solari "El Indio". A na - ede aha a na Santiago Solari nke a na - akpọ aha "El Indiesito"Nke pụtara obere Indian. Eduardo, bụ nna Santiago, bụ Miguel Solari, malitere ọrụ ọkachamara ya na Rosario Central (afọ 1966) n'otu afọ ahụ nwanne ya nwoke nke okenye nyere ya na World Cup. N'okpuru ebe a bụ foto nke Santiago nna mgbe ọ na-egwu egwu.
Eduardo ji aka ya niile rụọ ọrụ na South America (Argentina & Columbia) wee laa ezumike nká n'afọ 1981.
Ndị ezinụlọ Solari nwekwara di na-aga ịlụ di na nwunye na-abata ịlụ nwa ha nwaanyị. N'afọ 1992, nwa nwanne Santiago Natalia, nwa nwanyị Jorge Solari lụrụ di na nwunye mmeri atọ, Fernando Redondo (dị n'okpuru). Redondo nọchiri anya Real Madrid na òtù Argentine.
Santiago Solari Nwa Akuko nke a na - Ndị Ezinụlọ Ezinụlọ
N'ime ụmụnne Santiago, Esteban Andrés Solari Poggio Tano dị n'okpuru ebe a bụ ihe kachasị ewu ewu. A mụrụ ndị ọkachamara nke ndị Argentine na 2nd nke June, 1980.
Esteban n'oge ọrụ ya jere dị ka onye na-eti ihe ma gbanye ihe mgbaru ọsọ 120 n'etiti 2001 na 2016. David Eduardo Solari Poggio nke dị n'okpuru ebe a bụ onye na-ewu ewu n'etiti ụmụnna Santiago.
A mụrụ David na 21st nke March, 1986 na obodo Barranquilla dị na Columbia. Dị ka n'oge ederede, ọ na-arụ ọrụ ugbu a Enosis Neon Paralimni FC na Cypriot Nke Abụọ Nkeji. Martin Solari, bụ onye a ma ama bụ nwanne ikpeazụ na Santiago. Dị nnọọ ka nwunye Santiago na ụmụ ya, ntakịrị ihe a makwaara banyere mama Santiago Solari nke aha ya bụ Alicia Susana Poggio.
Banyere Santiago Solari Nwanyị: Liz Solari bụ onye a ma ama Onye na-eme ihe nkiri Argentina bụ onye malitere ọrụ ya na mbụ, dị ka ihe nlereanya, tupu ya abanye na fim na mpaghara ndị ọzọ.
A mụrụ Liz na June 18, 1983, in Barranquilla, Colombia. Oge ọmụmụ ya dabara n'oge nna ya mere otu ìgwè Columbian.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Santiago Solari Ụmụaka na akụkọ na-adịghị mma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.